Torohevitra: Mamaly ny fanontaniany lehibe momba ny COVID-19 | Lantian Bishui
Torohevitra: Mamaly ny fanontanina lehibe momba ny COVID-19 ireo manam-pahaizana
Fa maninona ny tsena ambongadiny Xinfadi no ahiahiana ho loharanon'ny valan'aretina COVID-19 farany teo tany Beijing?
Raha ny mahazatra, arakaraky ny fihenan'ny maripana no ahafahan'ny viriosy lava velona velona. Amin'ireo tsena ambongadiny toy izany dia tahiry mangatsiaka ny hazandranomasina, ahafahan'ny viriosy miaina maharitra mandritra ny fotoana lava, ka mitombo ny fahafaha-mampita azy amin'ny olona. Ankoatr'izay, olona marobe no miditra sy mivoaka ny toerana toy izany, ary ny olona tokana miditra amin'ny virus corona dia mety hiteraka ny fihanaky ny virus amin'ireo toerana ireo. Satria hita fa misy ifandraisany amin'ny tsena ireo tranga voamarina rehetra tamin'ity valanaretina ity, dia nojerena ny tsena.
Inona no loharanon'ny fampitana ny virus eo amin'ny tsena? Olona, ​​sakafon-tsakafo toy ny hena, trondro na zavatra hafa amidy eny an-tsena ve?
Wu: Sarotra be ny mamintina ny loharanon'ilay fampitana. Tsy azonay atao ny manatsoaka hevitra fa ny salmon amidy eny an-tsena no loharano niorina tamin'ny fahitana fa nanapaka ny tabilaon'ny salmon tao an-tsena fa voan'ny virus io. Mety misy ny fahafaha-manao hafa toa ny hoe tompon'antoka amin'ny takelaka fanapahana iray no voa, na sakafo hafa amidin'ny tompon'ny takelaka fanapahana azy io. Na mpividy avy amin'ny tanàna hafa no nahatonga ny fihanaky ny viriosy teny an-tsena. Be ny fikorianan'ny olona eny an-tsena, ary namidy ny zavatra maro. Azo inoana fa tsy ho hita ao anatin'ny fotoana fohy ny loharanon'ny fampitana.
Talohan'ny nitrangan'ny fipoahana dia tsy nitatitra tranga COVID-19 vaovao nafindra teto an-toerana i Beijing nandritra ny 50 andro mahery, ary tsy tokony ho avy tao amin'ny tsena ny virus corona. Raha voamarina taorian'ny famotopotorana fa tsy nisy tamin'ireo tranga vaovao nanaporofo fa voan'ny virus ny aretina tao Beijing, dia azo inoana fa nampidirina tao Beijing avy any ampitan-dranomasina na toerana hafa any Chine io virus io tamin'ny alàlan'ny entana voapoizina.
Vokatra mafana, Sitemap, Famafana lamba isaky ny mifono, Sunscreen Wipe, Taratasy fikasana tsara indrindra, Tissue fanadiovana lens,